QALITAANKA SPATHIPHYLLUM: NOOCA CARRADA IYO DHERIGA AYAA LOO BAAHAN YAHAY, GOORTA IYO SIDA LOO BEDELO - SOOSAARKA DALAGGA
Dhirta indoorka dhexdeeda, spatifillum waxay qabataa meel gaar ah. Waxay yihiin kuwo aan qabyo ahayn ee daryeelka iyo muuqaal muuqaal leh (gaar ahaan xilliga ubax). Laakiin milkiilayaasha mucjiso sida badanaa waxay qaataan su'aasha - sidee loo bedelaa ubaxa ubaxa ah, iyo waxa loo baahan yahay arrintan?
Miyaan u baahanahay inaan dib u soo celiyo spathiphyllum ka dib iibsiga
Gawaadhida warshadan ka dib iibsigu waa shuruud u ah in lagu hayo spathiphyllum. Laakiin waa inaadan ku degdegin: beeralayda khibrada leh waxay ku talinayaan in ay sameeyaan nidaamkaan 2-3 toddobaad ka dib iibsiga. Waxay qaadan doontaa waqti aad u badan ubaxa si loogu isticmaalo guriga cusub (iyo dusha microclimate ee guriga) ugu yaraan yar. Dhaqdhaqaaqii hore wuxuu sababi karaa walwal dheeraad ah isaga. Laakiin waxaa jira waxyaabo ka reeban xeerkan. Haddii la ogaado in ubaxa caleemaha si fiican loo tolo iyo duuduubka dukaanka, macnaheedu waa in aad horey u haysatid warshad gaboobay oo aad u baahan tahay si aad u badbaadiso (oo ay ku jirto shub). Si kastaba ha noqotee, shaqo noocan oo kale ahi waxay halis weyn u tahay qaadashada spathiphyllum - waxaa suurtagal ah in wareejinta xaaladaha degdegga ahi ay noqoto mid aad u adag.
Ma suurtogal tahay in la soo celiyo spathiphyllum inta lagu jiro ubax
Muddada ubaxu dhasho waa mid aan loo baahnayn, laakiin weli waa suurtogal. Waxay qaadaan talaabo noocan oo kale ah haddii ay dhacdo baahi aad u daran - marka ay weerarto duleedyada iyo cayayaanka caleenta ama lumid cad oo tayo wanaagsan leh ee ciidda.
Waa muhiim! Dhirta qaangaarka ah ee ku dhow dharabka farsamo ee ay ku iibiyaan. Muddo dheer ku jiree weelka noocan oo kale ah ayaa hor istaagi kara koritaanka rhizomes, taas oo si xun u saameeysa ubax.
Habka soo baxay waa habka loo wareejiyo: warshadda waxaa loo wareejiyaa dher kale iyadoo aan laga jarin jilitaanka ciidda oo ka soo baxa xididada. Nidaamkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ilaaliso dheelitirka ugu yar ee nafaqooyinka, sidaas darteed lagama maarmaan inta lagu jiro xilliga ubax. Laakiin mar kale - nidaam la mid ah ayaa lagu fuliyaa oo keliya marka ay jirto xaalad degdeg ah. Haddii aad taabatid Spathiphyllum Blooming sababo aan muuqan, dhirta ayaa laga yaabaa inay ku falceliso by madow ama isku dhejin caleemaha. Inta badan, dareen-celinta si ay u guurto ubax caafimaad qaba waa maqnaanshaha ugxan.
Sidoo kale strawberries cagaaran, canab, chrysanthemum, peony, raspberry, orchid, violet, iris, ubax, geedo lacag iyo tulips.
Imisa jeer ayaan u baahanahay in aan ku tallaalo
Spathiphyllum waxaa badanaa la googooyaa sanadkiiba mar guga. Badanaa waxaa loo yaqaan 'frequency' - marka loo eego 2 ama 3 sano. Si kastaba ha noqotee, ubax leh xididada dhakhso u koraya oo sameysma kubad ballaaran oo dhulka ah, tani waa mid aad u dheer. "Kordhin" waxa ku jira dheriga ugu dhow, milkiiluhu wuxuu yareeyaa xoogga ubaxa. Tijaabada dhalmada waa in la meelmariyaa hal mar sannadkii, iyo kuwa da'da ah 2dii sanoba mar.
Marka ugu fiican ee la sameeyo
Waqtiga ugu fiicani waa bilowga guga, xitaa kahor ubax. Laakiin halkan, sidoo kale, fursadaha waa suurtagal. Tusaale ahaan, haddii dambe, marka la eegayo cagaarka, waxaa la ogaadey in caleemaha hoose ay bilaabeen inay hoos u dhacaan, ka dibna waxaanu sameyn doonaa inaan nadiifin nadaafadeed.
Ma taqaanaa? Australia gudaheeda, ubaxyo gaar ah koraan - Orchids Risentella oo ubax ah ... dhulka hoostiisa.
Taasina waxay khuseysaa dhibaatooyinka kale sida kufsiga sheyga ama dhibaatooyinka lafdhabarka laftiisa. Muhiim u ah halkaan waa heerkulka hawada qolka. Waa in ay ahaataa + 20 ... +24.
Baro sida loo doorto dheriga orchid.
Dheriga Spathiphyllum: xulashada iyo diyaarinta
Awoodda cusub ee ubaxa waa la doortaa, oo lagu hogaamiyo xeer fudud, - dheriga waa inuu ahaado wax yar ka hor. Xaqiiqdu waxay tahay in nidaam xidid oo horumar leh, si adag u xoqdo ciidda, si firfircoon u samayso qolka dhulka hoostiisa. Haddii, si kastaba ha ahaatee, u guurto spathiphyllum si mug leh oo aad u cufan, ubaxu wuxuu qaadan karaa waqti dheer (ilaa xididada ku yaala mugga oo dhan). Iyadoo koror tartiib tartiib ah ee xajmiga dhibaatooyinka noocan ahi ma soo baxaan, ubaxu wuxuu ku dhacaa iyada oo aan la helin dadaal dheeri ah. Tani waxay u qaadeysaa weelka leh dhexroor 10-15 cm. Doorashada dher cusub iyo hubinta in uu leeyahay dalool saafi ah, dheecaan ayaa la dhigayaa xagga hoose. Si aad tan u sameysid, dufcadaha waaweyn, dhoobada ballaaran ama boodhka leysu dhajiyo, lakabka lafdhabarta 1.5-2 cm, waxay noqon doontaa mid ku habboon. Tababarka ayaa muujinaya in bannaanka u badan, adoo isticmaalaya dhoobada dhoobada, ha isticmaalin dheecaan. Geed xoog leh ma baqdo, laakiin kiisaska dhalinyarada iyo walxaha jilicsan ayaa weli ka sii fiican oo qaldan.
Waa maxay ciidda loo baahan yahay
Spathiphyllum waxay u baahan tahay ciid ah dabacsan oo iftiin leh acidity daciif ah. Habka ugu sahlan waa in la iibsado walxaha ciidda ganacsiga ee ubaxyada ubaxyada iyo ubaxyada, oo ku daraya ciid yar oo aan qalafsanayn.
Waa muhiim! Marka aad iibsanayso substrate-diyaar ah, fiiro gaar ah u of aidsit - waa inay ka yar tahay 6.5 pH.
Qaar badani waxay diyaariyaan ciidkooda, iyo iskudhafka ugu caansan ee qaybaha soo socda:
caleen iyo dhulbeereed;
Afarta qaybood ee ugu horeeya waxaa lagu qaadaa cabirrada 1: 1: 0.5: 0.5, iyo sphagnum waxaa lagu daraa waxoogaa yar (qiyaastii 0.2) - waxay ka ilaalisaa ciidda in ay qalajiso. Waxaad qaadan kartaa isku darka kale oo bixiya aereyn wanaagsan. Waxaa ku jira:
2 xabbo oo dhul ah;
1 qaybood oo ah xaashida ciidda, peat iyo ciid adag;
jilicsan oo geedo ah oo googo'an;
Afarta qaybood ee ugu dambeysa ayaa ah wax lagu daro, tirada guud ee ah ee substrate waa in aanay ka badnaan 10%. Nooc kale oo ka mid ah isku dar ah ciidda waxaa lagu diyaariyaa adoo isku dardaraya carrada iibsan, jilif geed, iwm. Diirada ugu dambeysa waa 5: 1: 1: 0.5. Laakiin halkan waxaan u baahan nahay saxnimada ugu sarreysa: kormeerka qiyaasta humus waxay ku hanjabtaa inay xoojiso qalajinta xididada.
Kobaca freesia, qoryaha, dill, Rose, koriye, juniper, oo toon ah iyo alwaax dheriga.
Qalabka wuxuu u baahan doonaa ugu yaraan:
majaraf beerta ama majarafad;
mindi fiiqan ama maqas;
Ma taqaanaa? Saacaddii ugu horeysay ee ubaxa waxaa lagu beeray ku dhowaad 300 sano ka hor (1720). Horudhacayaashan ee jihada this waa beerta Swiss.
Waa inaad ka shaqeysaa gacmo-gashiga (doorbididda caag ah - xirtid suuf, waxaad miisaanka ku dhimi kartaa dadaal iyo waxyeelo u gaarsiisan tahay rhizome).
Isu diyaarinta Spathiphyllum ee loo yaqaan 'Transplant'
Marxaladda hore ee isu-tallaalidda waa diyaarinta ubaxa lafteeda. Marka laga hadlayo spathiphyllum, waxaa la fuliyaa iyadoo loo eegayo qaabka soo socda:
Ciidda dusigii hore way qoyan yihiin, ka dibna si tartiib ah ayay ula qabsadeen aaladda beerta.
Warshadda waxaa la saaraa buro.
Dabadeed rizuusku si taxadar leh ayaa loo nadiifiyaa ka soo qubeyaal hore iyo ciidda.
Gaabashooyinka ama kuwa yaryar oo yar ayaa la gooyaa (hal talaabo, ha cidhibin ubax).
Raadi caleemo qadiimi ah, gaar ahaan saldhigyadooda - waxaa sidoo kale laga saaraa (si looga hortago lakab). Badanaa way jebiyaan iyada oo aan dadaal badan.
Waxay ku sii jireysaa in ay yareeyaan xididada dhaadheer ama caleemaha - iyo Spathiphyllum waxay diyaar u tahay inay u guurto weel cusub.
Soo wareejinta tijaabada dadka waaweyn waxaa inta badan lagu daraa dhalmo. Sidaa awgeed, kubbadda xididada ee la gooyey ayaa la jarjarey qaybo badan, iyagoo hubinaya in qayb kasta ay leedahay qayb caafimaad qabta oo ah mid xasilan.
Waa muhiim! Goobaha la gooyey waxaa lagu qurxiyey dhuxul - waa nooc ka mid ah antiseptic.
Maskaxda ku hay in haddii beerka aan la samayn muddo 2-3 sano ah, markaa waxaa jiri doona waxyaabo badan oo ka mid ah goobahaas, sidaas darteed haddii aysan jirin meel loogu talagalay dheriyo cusub, waxaa habboon in la diido qaybinta.
Sidee loo bedelaa dheriga kale
Ma jiraan wax khiyaamo ah:
Substrate qoyan ayaa lagu shubay dusha sare ee qasabadda.
Dhexdhexaadiyaha dhererka dareenka yar.
Waxay lugta ku dhigtay xididada si tartiib ah u furma.
Godka ayaa si dhakhso ah u buuxsameeyaa qayb cusub oo ciid ah, ma iloobin in ay burburiso ciidda agagaarka jirkaaga (illaa heerkeedu gaaro caleemaha).
Isla markiiba ka dib markaan ku tallaalid waa inuu ahaadaa waraabin badan. Isu diyaari si aad u hubiso in ciidda si yar loo dhigo, iyo substrate waa inay ku shubaan. Tani waa qodob muhiim ah - haddii aad seegto, dhirku wuxuu ku dhalin karaa dheri.
Ugu dambeyntii, hubi inaad ku buufiso caleemaha.
Si loo helo aqbalo meel cusub, dhirta waxay u baahan tahay inay abuurto xaalado gaar ah mudo ah.
Video: Isku-beddelka Spathiphyllum
Daryeelka ka dib isbitaalka
Toddobaadka ugu horreeya ka dib markii la wareejiyo, dhirta waxaa lagu hayaa hadhka, ka dibna dheriga waxaa la dhigayaa meeshii caadiga ahayd (oo leh heerkul ah + 16 ... +27 iyo nalalka aan tooska ahayn). Wakhtigan oo dhan, caleemaha waxaa la buufiyaa maalin kasta, iyo haddii ay jiraan wax welwel ah oo ku saabsan cilladahooda, ka dibna dhowr jeer maalintii.
Ma taqaanaa? Jiritaanka xididada Koonfur Afrika waxay u koraan ilaa 120 m.
Ciidda ee lakabka sare waa in ay ahaato mid dhexdhexaad ah - xilliga diiran ee kulaylka ah ee waraabinta leh biyo diiran jilicsan waa 2-3 jeer (halka horaanta gu'ga 1-2 noqon doonaa ku filan). Sababtoo ah asalkeeda tropical ah, spathiphyllum wuxuu u baahan yahay inuu heysto sare (in ka badan 50%) qoyaan. Qolalka kuleylka leh, ma aha had iyo jeer suurtagal ah in lagu hayo xuduudahaas. Laakiin waxaa jira jidka dibadda - ugu yaraan 1-2 toddobaad ee ugu horreeya ka dib markii la wareejiyo, ubaxa waxaa gebi ahaanba lagu duudduubay polyetylen daahfuran, kormeerida dheelitirka biyaha. Ku saabsan dhaymada waxaa ku jira miisaan: 1.5 bilood laga bilaabo taariikhda qaliinka aan la bixin. Muddadan ka dib, waxay u wareegaan nidaamka caadiga ah, Bacriminta waxaa loo adeegsadaa sida caadiga ah (1 jeer toddobaadkii inta lagu jiro xilliga koritaanka iyo 1 mar bishiiba xilliga qaboobaha). Dajinta dareeraha ah, qalabka dabiiciga ah ama xayiraadaha macdanta ah ee la iibsaday lage waxaa loo isticmaalaa. Qof kasta ayaa qaban kara hawsha bedelka spathiphyllum: waxaa loo baahan yahay dareen iyo taxadar (xitaa fudud) daryeel. Goobta kuleylka ah waxay uqalmaysaa indhaha oo waxay abuurtaa raaxo gurigeed sanado badan!
Dhammaan dhirta la soo iibsaday waa in lagu faafiyo (maaha inay dhaafaan), hubi xididada, geedi socodka cayayaanka (xiitaa haddii aadan arag iyaga - si looga hortago). Dheeraad ah, ubax waa la Bloomi karaa oo muuqaal qurxoon, gudaha - gudaha dukaanka inta badan waa burburay.
Waxaan haystaa 3 maalmood ka dib markaan ku tallaalno adigoo maqaarka ku haya, ma yareynayo caleemaha, ma qallajinayso dhamaadka. Laakiin way iska aamusnayd hadda, ma jirto wax ka mid ah koritaanka ama soo bandhigida tuubooyinka xaashida iyo hal buduun. Aynu aragnay waxa dhacaya xiga ... Waxaan maalin kasta ku buufiyaa jarrifka habeenkii, ka dib markii waxoogaa yar waraabiyo ka dib markii la beero, weli wali ma waraabin.